I-OnePlus 6T iya kuziswa ngokusemthethweni ngo-Okthobha 29 | I-Androidsis
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo umhla wokubhengezwa ngokusesikweni kwe-OnePlus 6T wabhengezwa. Isibhengezo esenziwe ngumenzi waseTshayina uqobo, kunye nomhla kabani owawucwangciselwe u-Okthobha u-30. Nangona kule veki kwabhengezwa oko U-Apple wayebambe umsitho wemiboniso emininzi nge-30 ka-Okthobha. ENew York. Kwesinye isixeko kunye nomhla ofanayo nomnyhadala wohlobo lweshayina.
Ngesi sizathu, ifemi inyanzelwe ukuba itshintshe umhla apho isiphelo esiphezulu siza kuboniswa khona. Bazibhengezile ngokwabo, sele bebonisa umhla omtsha apho i-OnePlus 6T iya kuboniswa khona.
Umhla wokubonisa isiphelo esiphezulu uhanjisiwe. Ngele ndlela, Ukuboniswa kwe-OnePlus 6T kuya kwenzeka ngo-Okthobha u-29 endaweni ka-Okthobha 30. Ke kuyakufuneka silinde iiyure ezingama-24 ezingaphantsi ukuze sikwazi ukuyazi le fowuni. Kwakhona basinike inkcazo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, sisiganeko esacwangciswa nguApple nge-30 ka-Okthobha ejongene ikakhulu. Uphawu lwaseTshayina luqinisekisile ukuba emva kokuqwalaselwa kakhulu, umcimbi wefemu yaseMelika ngewawubile lonke udumo kwi-OnePlus 6T yayo. Ke ngoko, kungcono ukuguqula umhla wakho wokufayilisha.
Ke ukunikezelwa kwefowuni kuziswa ngaphambili iiyure ezingama-24, nge-29 ka-Okthobha ingumhla wokugqibela. Yonke into ibonisa ukuba iya kuba kwindawo enye kwaye ngaxeshanye Oko bekucwangcisiwe kwasekuqaleni, nangona kule ngqondo kungekho siqinisekiso sivela kumenzi.
Ngokuqinisekileyo kwezi ntsuku ngaphambi kokuboniswa kwe-OnePlus 6T okanyeSiza kuba neenkcukacha ezithile malunga nomsitho. Khange kube sisigqibo esilula sophawu, kodwa sesona sigqibo siqinisekileyo sokuqinisekisa ukuba iflegi yayo entsha ayiweli kwisithunzi seemveliso zika-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OnePlus iguqula umhla wokubonisa we-OnePlus 6T